DHAMMAADKA isbuucii hore Daniel ama dhammaadka 2015 END 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
13kii September 2015 kiniisadda aan la saaray iyo Ciise Masiix oo ma ku soo laabto dhulka ama 14 ama 15 September 2015!
Si loo fahmo, aan ka qaato falanqayn ugu dambaysta jeer sharaxay in blog hore aan posts.
Waayo, waxaa inoo Nasaara, usbuucii la soo dhaafay ee Daniel waa muddo todoba sano ah in uu dhamaado dhamaadka waqtiga, ka dib markii taas oo Ciise Masiix ku soo laaban doonaa si ay u xukumaan dunida oo intii kun sannadood ah ilaa iyo Qiyaamaha.
Inta lagu jiro mudada la soo dhaafay taas oo toddoba sannadood ah aadanaha ku noolaan doonaa dhibaatooyinka. Galnaa waxay noqon doonaan wakhtiyo aad u adag, sababtoo ah waxay u arkaan cadaabka iyo maalinta cadhada Ilaah.
Waxaa ciqaabyadan tartiib tartiib ah uu noqon doono sababtoo ah soo laabashada Ciise Masiix u noqon doonaa sida in xanuunkii foosha iyo waxaynu og nahay in xanuunka yihiin oo sii kordheysa cad doono ilaa dhalmada.
Waxaan fahamsanahay in ugu dambayn ay daqiiqado ugu adag ee waqtiga nolosha « ninka » dhulka ku noqon doonaa maalmaha ugu dambeeya horreeya soo laabashada Ciise Masiix.
In articles aan hore waxaan sharaxay in times dhamaadka bilaabay May 14, 1948 waqtiga abuurka ah ee gobolka reer binu Israa’iil, maxaa yeelay, dhammaan xanuunka bilaabay on taariikhdaas. Taariikhda jiro in nala xasuusiyo oo aad ku xaqiijisid.
Mid ka mid ah eegaa soo dhaafay iyadoo la hubo noo ogolaaneysa in la muujiyo sii xumaanaysa oo ka mid ah dhibaatooyinka aadanaha laga bilaabo taariikhda in. Dhibaatooyinkaas, waxaan sidoo kale xusay in shaqsi aan posts blog.
Ogsoonow in usbuucii la soo dhaafay kitaabiga ah ayaa lagu sii sheegtay nebi Daanyeel, qaar ka mid ah 600 oo sano ka hor soo socda ugu horreeya ee Ciise Masiix iyo sida aynu hore u arkay xilli dhab ah toddoba sannadood waa inay buuxiyaan dhamaadka waqtiga.
Waxaan hypothesized in bilaabay September 29, 2008 Shil suuqa saamiyada ee Wall Street.
Waxaa cad in tan iyo taariikhdaas of 29 September 2008 waxsii kitaabiga ah iyo calaamadaha digniinta ah ee soo celinta dhulka ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix yimaado run badan ee xoog, cabirkiisu, xoogga iyo inta jeer ee weyn.
Waxaan ka calaamooyinkan burburinta caalami ah ayaa si tartiib ah uga sii daray tan iyo taariikhdaas of 29 September 2008 halkaas oo la abuuray by burburkii qiimaha New York Stock Exchange la caanka -777.77 arki xilligan saxda ah ee xayndaabka. waxaan idiin ku yeedhi xagga kitaabka ku akhriyey ee Pierre Jovanovic 777.
Iyadoo eegno fudud ee la soo dhaafay aan ku aragno sida laga bilaabo taariikhda in September 29, 2008 masiibooyinka iyo masiibooyinka cimilada oo sii xumaatay si aan caadi ahayn in gees kasta oo caalamka.
Sidoo kale ma iska indho tiri karo in si tartiib tartiib ah tan iyo markaas adduunka xanuunka khasaaraha ka mid ah qiyamka Christian, ay bateen xag-jirnimada, iyo bilowgii dagaalka dhab wadaan Islaamiyiinta ka dhanka ah ay dadka Christian.
Maanta dabayaaqadii 2015, sida iska cad, waxaa iska cad in tan iyo September 29, 2008, toddoba sannadood ka dibna tan, aadanaha ku nool waqti aad u adag. Amni-darrada, saboolnimada, rabshadaha iyo dagaalladu yihiin hawlo badan oo maalin kasta oo dad ah.
Humanity nool jeer aad u adag oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Yurub.
Waxaan sidoo kale karaa oo aynu eegi doono la soo dhaafay, waxay u arkaan in tan iyo 2012 waxaa jira Faahfaahin dhab ah oo dhan dhibaatooyin, masiibooyinka, masiibooyin, rabshadaha iyo isku dhacyada in ay noqdaan dagaalka adduunka Qaybo Kala.
Indeed, tan iyo March 2012 adduunyo ee dhaw waa dagaal. Waa marayo bariga iyo gaar ahaan Suuriya in ciidammadii reer dalal badan oo dunida ka yihiin dagaalka.
In view of xaqiiqooyinka oo dhan waxaa ugu sugan calaamooyin iyo dhammaystirka in sheegidda Bible, waan soo sara kiciyey suurtogalnimada uu ku laabto Ciise Masiix 14 view September 15, 2015.
Sida iska cad ee todobaadkii la soo dhaafay of Daniel ayaa ku soo bilowday 29 September 2008 oo uu si wanaagsan u buuxiyo September 29, 2015 …!
Oo weliba waxaan kulligiin waad aragteen dhammaadkii September 2015 in lid ku ah aan falanqaynta, Ciise Masiix oo aan ku soo laabtay iyo isaga oo kaniisad aan la saaro …!
Niyad Taasi oo dhan akhristayaasha blog, waxaan ka war ahay oo waan ka sii fiican in aan la wadaago uga xun yahay in ay fahmaan!
Dabcan sida aad ogtahay ma ihi nin nebi ah oo weligayo sheegtay inuu yahay.
Si kastaba ha ahaatee, xitaa iyada oo aan isagoo nebi, waxaan dhihi karaa xoog, go’aanka iyo xukun in soo laabashada Ciise Masiix dhab ahaantii waa mid aad u dhow.
Hadalkani waa ay sabab u tahay wax-qabadka xoog, ballaadhkiisuna wuxuu, xoogga iyo inta jeer ee dhan waxsii kitaabiga ah iyo dhammaan calaamadaha soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix.
Waxay dhammaadaan muran la’aan, xoog, baaxadda iyo jeer ka weyn tan iyo September 29, 2008.
Markaas, sida mid kasta oo idinka mid ah, waxaan is weydiiyay sida ay tahay in Ciise Masiix aan weli dib u Earth, inkastoo ay guul u ah dhammaan calaamadaha iyo waxsii sheegista, oo ay ku jiraan dagaal ay la East in dhammaan suurtagalnimada waa in dagaalka Armageddoon waa in ay qaataan Ciise Masiix ee uu ka soo laabtay.
Aniga run ahaantii qaldan? Waxaa cad in ugu yaraan sida muuqata ay haa tahay! Tani waxay sidoo kale noqon lahayd caadiga ah tan kaliya ee Eebe waa ogyahay maalin iyo saacad ah soo laabashada Ciise Masiix!
Dhibaatada aan wajahno haddii aan ahay qalad ah, waa in dhammaan masiibooyin ah in aan ku nool yihiin dhulka duurka oo dhan, waa wax aan waxba soo socota si ay kuwa naga sugi sida aynu ognahay in masiibooyinka iyo xanuunka uga sii daraan mar kale iyo mar kale weligiis ilaa laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix!
Haddana waxaan fahamsanahay in aan qabto dhibaato dhab ah oo halis ah uu noo hor.
Sida aan hore u sharaxay in articles aan hore, soo laabashada Ciise Masiix dhici karaan maalin kasta tan iyo markii ay calaamada hore ka dhacay May 14, 1948 maxaa yeelay, Ilaah soo gaabin karaa xanuunsadaa iyo xanuun.
Waqtiga ugu danbeeya ee dhamaadka waqtiga waa uu nool yahay ka ugu badan ee jiilka ku dhashay 1948 (May 14, 1948 qabka, sida aynu hore u arkay, taariikhda ay calaamada hore ee times dhamaadka).
Tani waxay noo keena 2068 sida nolosha ugu badnaan Aadanahu waa 120 sano ee Kitaabka Quduuska ah.
Laakiin siiyo xoojinta, xoog, baaxadda iyo inta jeer ee calaamadaha Darteed guulihii iyo wax sii sheegiddii ah soo laabashada Ciise Masiix, waa in aan fahamsanahay in this soo laabto xilli dhow.
Laakiin markaas, haddii aan qaldo ma ahi, sababta dib u dhaca …!
Wada hadal iyo falanqayn xaaladda ka dib, waxaan helay laga yaabaa in sharaxaad.
My shakhi iyo falanqaynta sidoo kale kaa caawin karaan in ay sharaxaad ka bixiyo wararka ee afduubka u September 13, 2015, ay sameeyeen kadib haduuna walaalkood raacin Claude IGNERSKI.
Our Walaal Claude ayaa qabtay shaqo cajiib ah soo sharaxay sadex shuqullo badan dhammaadka waqtiga. Waxaan idiin ku yeedhi oo dhan si ay u akhriyaan.
Waxa uu soo gaaray lynching dulmiyo dhab by Walaalayaal isagoo ku eedeeyey in isagoo nebi been ah.
Weliba waxaan qabaa inuu weli qeyb ahaan ay jirto xaqiiqda ah inkiri karo in aan kaniisadda saaray September 13, 2015, sida uu qorshaystay.
Ha fikirro si ay u fahmaan,
Xiisadda dhaqaale oo bilaabay September 29, 2008 muuqataa in ay sida cad noqon hore galnaa, siin shil suuqa saamiyada ee Wall Street iyo oofinta ka mid ah calaamadaha iyo waxsii sheegista ah ee times dhamaadka in raacay.
Waxa aynnu og nahay dhibaatooyinka kuwani waa muddo toddoba sannadood oo kala qaybsan yihiin laba qaybood oo ah saddex iyo badh kasta.
Su’aasha koowaad ayaan is weydiiyay:
Maxay Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in labo jeer oo saddex iyo badh?
Xusay in mar kale qaybta labaad uu noqon lahaa mid dhib badan kuwii hore ka badan.
Waxay ahayd hawl yar, in la yidhaahdo in xanuunka noqon doonaan toddoba sannadood oo horumar …!
Sida aan waxba waxa ku qoran wax Kitaabka Quduuska ah, sax this saddex sano iyo badh ah dual sidaa darteed waxaa jirta sabab ay sidaas ku xusan.
Saddex iyo badh sannadood ka dib September 29, 2008 Nooga keeno 29 March 2012 iyo qaybta labaad ee saddex iyo badh ku faraxsan afjaridda September 29, 2015.
Taariikhda September 29, 2015 oo kaliya waxaa laga yaabaa in maalinta ugu danbaysa ee in ay qayb ka mid ah kaniisadda Ciise Masiix laga saari doonaa.
Laakiin kuwii la doortay si ay u sii dhulka ilaa maalintii afduubka by malaa’igaha Ciise Masiix.
Xusuusnow in Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in Daniel 12 aayadda 11:
« Laga soo bilaabo xilligan qurbaanka joogtada ah joogsan doonaa markii baas oo hallaynta ah lagu rakibi doonaa, 1.290 maalmood doonaa gudbin « .
The 1290 maalmood waa saddex sano iyo badh ama 42 bilood oo ka mid ah dhibaatooyinka ka qeyb labaad « dhibaatadii weynayd »
Aayaddan 12 aan akhrino,
« Waxaa mahad leh , isagaa ah kan suga oo ku guuleystaan ​​1335 maalmood! «
Waxaan rumaysanahay in Ciise Masiix ayaa iskood ah uga tageen xubnaha la doortay ee uu kaniisad in ay sugaan (sida ku jirta aayadda 12 ka mid ah cutubka 12 ee Daniel) on Earth in la sameeyo in 1335 maalmood.
Xaqiiqadaas, haddii aan qaldo, laba bilood iyo 21 maalmood oo kale in lagu daro 29 September 2015. aan ahay Tani waxay noo keenaDecember 20, 2015 u soo laabashada Ciise Masiix waxaan sugayay September 2015.
Dib jirka ah Rabbigeenna Ciise Masiix waa in uu ka muuqadaa ka saarida ee qaar ka mid ah isaga oo kaniisad.
Fikirka ku My labaad:
Sida aan sheegay wax yar ka hor qoraalka, waxba ku qoran Kitaabka Quduuska ah oo aan waxba si haddii toddobadii sannadood ee la soo dhaafay waxaa loo kala qaybiyay laba saddex jeer iyo badh markaas waa in aan fahamsanahay in ay jiraan waxaa laga yaabaa in Muddo dhintay u dhaxaysay labada muddo saddex iyo badh.
In taasoo qayb koowaad ee saddex sano iyo badh ah oo sida la qorsheeyay afjaridda March 29, 2012, laakiin kulankii labaad bilaabo wax yar ka dib.
Taasoo taariikhda badan lagu soo xulay kartaa bilowgii dhibaatadii weynayd.
Aayaddan 11 ka mid ah cutubka 12 ee Daniel
1) Taariikhda istiqaalad ee Pope Benedict XVI: The February 28, 2013
2) taariikhda magacawga ee Pope Francis: March 13, 2013
Waxaan sidoo kale raajiso mar saddexaad:
Mid ka mid ah halkaas oo François Pope uu xukumaa Jidka Cross: Friday ayaa March 29, 2013.
In taasoo soo laabashada Ciise Masiix uu dhici karo in qeybtii labaad ee 2016 waxaana laga yaabaa oo ku beegnaa dabaal Tubalow Hashanah 03 iyo October 4, 2016.
Soo noqoshada Ciise Masiix waa in uu ka muuqadaa ka saarida ee qaar ka mid ah isaga oo kaniisad.
Haddii soo laabashada Rabbi Ciise Masiix dhacdaa dabayaaqadii 2015 ama dhammaadka 2016, waxaynu Ku qiyaasi karo na aad ugu faraxsanahay, maxaa yeelay baaxadda xukummadaada Ilaah wuxuu noqon doonaa wax ka yar adag tahay haddii ay ku laabashada waxaa sii raagay mar.
Waayo, sida in xanuunka, ayaa caloolxumadaydii aadanaha oo ay u badan tahay ma, sii, oo ka sii daro oo mar kale ilaa laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix.
Haddii Ciise Masiix yahay ma socda, markaas cad badan oo aynu u oggolaan maayo!
Sidaas awgeed waa muhiim inuu ku tukado, oo Ilaah u barya mar kale iyo mar kale in ay weydiiso ilaahay inuu ku soo gaabin lagu xanuunsadaa oo xanuun noo ogolaanaya degdeg ah in Earth Rabbigeenna iyo King, Ciise Masiix wiilkiisa madiga soo laabtay.
Markii ugu samatabbixinta waa u dhow yahay laakiin maalmihii madoobaa ka hor ka hor.
Kaliya salaadda, rumaysadka iyo jacaylka naga caawin doonaa iyada oo gudcur la soo dhaafay.
Ka ilaali iftiinka ololkii rumaysadkeenna.
Soo jeeda oo tukada laabto degdegga ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix iyo King iyo Hi ee gudno.
Peace, jacayl iyo farxad guryahooda filanayeen maalinta barakaysan ee soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix.